ရွှေလိပ်တူးဘုရား၌တရားအားထုတ်ခြင်း | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
Posted on August 28, 2012 by chitnge
ညအခါ ရွှေလိပ်တူး ဘုရား၌ လျှပ်စစ်မီး ပူဇော်ထားသည်မရှိချေ။ ထို့ကြောင့် စာရေးသူတို့သည် ကားမီးနှင့်သာ တရားအားထုတ်ခဲ့ရသည်။ လရောင်၊ ကြယ်ရောင်များ ရှိသေး၍ အဆင်ပြေပါသည်။ ရွှေလိပ်တူး ဘုရားသည် မျက်နှာချင်းဆိုင်၌ ကွမ်းထမ်းမင်ရာဇာ ဘုရားနှင့် နီးသည်ဟု ဆိုရပေလိမ့်မည်။ အနီးတွင် ထီးလိုမင်းလို ဘုရားလည်း ရှိသည်။
ညအခါ တရားအားထုတ်ရသည်မှာ ကောင်းပါသည်၊ ဆိတ်ဆိတ်ငြိမ်ငြိမ် ရှိပါသည်။ တရားရှုခြင်းသည် ကောင်းသောအလုပ် ဖြစ်သည်။ တရားရှုဖန်များလာသောအခါ မိမိနှလုံးသွင်းချင်သော ပုံစံကို ရလာသကဲ့သို့ ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် သာဓုခေါ်ရသည်၊ တရားတော်မြတ်၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုလည်း ဦးထိပ်မှာ ပန်ဆင်သည်။ ရုပ်နာမ်နှစ်ပါး ခန္ဓာငါးပါးကို မြတ်စွာဘုရားလှူကာ၊ မြတ်စွာဘုရားကို ဦးထိပ်ထား၊ ဆရာမြတ်ကြီးကို ဦးထိပ်ထားကာ တရားရှုပါသည်။ မြတ်စွာဘုရား အမှုးပြု၍ သူတော်ကောင်းများ၊ ဆရာသမားကောင်းများကို ပူဇော်ရသည်မှာ ဤနေရာ၌ လွန်စွာ အဖိုးတန်ကြောင်း တွေ့ရသည်။
စာရေးသူတို့သည် ခန္ဓာကို ရှုကြရာ အခက်အခဲများစွာ မရှိချေ။ ညအချိန် ဖြစ်သော်လည်း ထူးထူးကဲကဲ လှိုင်းဂယက် များနှင့်ခံစားမှုများ အများအပြား မတွေ့ရချေ။ အဆင်ပြေလွယ်ပါသည် အနိစ္စ တစ်လုံးကို ခိုင်ခိုင်မာမာ သုံး၍ ရှုခြင်း ဖြစ်သည်။ အနိစ္စသည် လွန်စွာ အဖိုးတန်ကြောင်းကို အနိစ္စရှုလေလေ သိရလေလေ ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တိုင်တွေ့၊ ကိုယ်တိုင်သိ၊ ကိုယ်တိုင်ခံစားရသော သဘောရှိသည်။
အနိစ္စတစ်လုံးကို စာရေးသူသည် သေတစ်ဖန် သက်တစ်ဆုံး ရှုတော့မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ချက် ချပြီးသား ဖြစ်ရာ ယခုလည်း ရှုနေပါသည်။ လွန်ခဲ့သော အနှစ်(၄၀)လောက်က စတင်ပြီး ရှုလာသော ၀ိပဿနာတရား ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၀ိပဿနာအရာ၌ အတွေ့အကြုံများသည်။ သတိပဌာန် လေးမျိုး၊ နုပဿနာ လေးမျိုးစလုံးကို ရှုဖူးခဲ့သည်။ ယခင်က အစီရင်ခံထားသကဲ့သို့ စိတ္တာနုပဿနာနှင့် ဓမ္မာနုပဿကို အဓိထား၍ ရှုပါသည်။
ယောဂီများ စိတ္တာနုပဿနာနှင့် ဓမ္မာနုပဿနာအကြောင်းကို မေးမြန်းလိုက ကောင်းစွာ ဖြေကြားပေးနိုင်ပါ သည်။ ကိုယ်တိုင်တွေ့၊ ကိုယ်တိုင်သိပြီးနောက် ဆရာကောင်းဆရာမြတ်၏ သွန်သင်၊ ညွှန်ကြား၊ ဆုံးမစကားများ ရှိသောကြောင့် ယခုကဲ့သို့ သတင်းပေးနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
စိတ္တာနုပဿနာ ဆိုသည်မှာ ပေါ်စိတ်ကို အနိစ္စ ရှုခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဓမ္မာနုပဿနာ ဆိုသည်မှာ နူးညံ့သော သဘာဝလေး ဓမ္မသဘာဝလေးတွေကို ရှုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဓမ္မာနုပဿနာမှာ နူးညံ့ပါသည်။ စာရေးသူတို့ ရှုခါစက ဓမ္မာနုပဿနာ ရောက်လျှင် အိပ်ငိုက် ခဲ့ဖူးပါသည်။ ထိုအခါ အစားအသောက်ကို သတိ တော်တော် ထားရပါသည်။ အစားအသောက်တွင် လက္ခဏာရေး သုံးပါးနှင့် ဆင်ခြင်နိုင်မှသာလျှင် အိပ်ငိုက်ခြင်းကို ကုစားနိုင်သည်။ အထိုက်အလျှောက် ငယ်ရွယ်သေးသူ ဖြစ်သဖြင့် ထိုစဉ်က တရားရှု၍ကောင်းလျှင် အိပ်ငိုက် ခဲ့ဖူးပါသည်။ ယင်းကား ဓမ္မနုပဿနာ၏ နူးညံ့၊ သိမ်မွေ့မှု သဘောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
တရားသည် နူးညံ့၊ သိမ်မွေ့လာသောအခါ လိုက်ခဲ့ရသည်မှာ ခက်ခဲရင်းနှင့် မလိုက်နိုင်တော့ဘဲ မောဟ ၀င်သွားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါတော့မူ ပယ်ရသည်က သမုဒယဆို၍ – ပယ်ရသည်က သမုဒယကို ပယ်သည်။ သမုဒယကို မည်သို့ပယ်ပါသနည်း? ဟူမူ ဒုက္ခကို လက်မခံဘူးဆိုသော အပျက်ရှုခြင်းဖြင့် ပယ်ပါသည်။ သမုဒယ ပယ်ခြင်းနှင့် ဒုက္ခ သေခြင်းသည် အကြောင်းအကျိုး ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခါ နိရောဓသို့ မျက်မှောက်ပြုရန် ကြိုးစားရပါသည်။ ကြိုးစားရင်းနှင့် ခန္ဓာကိုယ်၏ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးများသည် ပေါ့လာ တတ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ခံစားရခြင်သည် တရားတော်မြတ်၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးဟု ကောင်းစွာ နားလည်၊ နှလုံးသွင်းအပ်၍ တရားအားထုတ်လေ့ရှိပါသည်။
ယခုအခါ ရွှေလိပ်တူး ဘုရား၌ တရားရှု၍ အောင်မြင်သည် ဖြစ်၍ အမျှအတန်း ပေးဝေကာ မေတ္တာများ ပို့သရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါသည်။
Tags: ၀ိပဿနာ, Buddhism, Myanmar Posts, စိတ္တာနုပဿနာ, ဆရာမြတ်ကြီး, အနိစ္စ, မြတ်စွာဘုရား
This entry was posted in Buddhism and tagged ၀ိပဿနာ, Buddhism, Myanmar Posts, စိတ္တာနုပဿနာ, ဆရာမြတ်ကြီး, အနိစ္စ, မြတ်စွာဘုရား. Bookmark the permalink.